Dowlada Norwey oo gabi ahaanba xireysa Iskuulada Waxbarashada Wadanka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaDowlada Norwey oo gabi ahaanba xireysa Iskuulada Waxbarashada Wadanka
Dowlada Norwey oo gabi ahaanba xireysa Iskuulada Waxbarashada Wadanka
January 24, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 0
Sawir: Berit Roald / NTB
Dowlada Noorweey ayaa biloowday diyaarinta gebi ahaanba xirida iskuulada iyo xanaanooyinka caruurta, laakiin waxay iska ilaalin doontaa ilaa inta ay suurta gal tahay, ayuu yiri wasiirka waxbarashada Guri Melby (V).
Iskuulada ku yaal gobolka Oslo waxay bilaabeen inay ku shaqeeyaan heer “Qatar” ah maalintii Sabtida. Gugii la soo dhaafay, dugsiyadu waa la xiray gebi ahaanba.
Muddo dheer, waxay umuuqatay in cabirka noocaas ah aan markale lagu soo rogi karin.
Si kastaba ha noqotee, fayraska is-beddelay ee Ingiriiska ayaa beddelay taas – horaantii Janaayo, dowladdu waxay bilowday inay isku diyaariso xiritaan cusub, oo gebi ahaanba xirmaya iskuulada.
Xilliga dayrta oo dhan, waxaan u maleyneynay in beddelka noocan ahi uusan khusayn, laakiin waa iska cadahay in isbeddelka uu beddelay taas Waxaan ka shaqeyneynaa inaan u diyaargarowno, laakiin waxaan runtii rajeynayaa inaysan taasi dhicin, ”Melby ayaa u sheegay news xafiiska NTB.
Xitaa haddii dugsiyadu ay xirmayaan, shuruudaha looga baahan yahay waxbarashadda dhijitaalka ah weli way khuseeyaan.